Ọdụ ụgbọ elu Klagenfurt LOWK Austria FSX & P3D
downloads 10 356
Nke a bụ ọmarịcha ọdụ ụgbọ elu Klagenfurt dị n'Austria nke Manfred Marbler, ihe nkiri v5 gụnyere foto-ezigbo ederede, ederede abalị, ụdị oge, ọtụtụ ụlọ 3D, ezigbo runway na ọdụ ụgbọ elu. Add-on nke ezigbo mma maka ihe ndebiri.
Klagenfurt Airport (ICAO: LOWK), a makwaara dị ka Kaernten Airport, bụ ọdụ ụgbọ nke Klagenfurt, nke isii-kasị ukwuu na obodo Austria. Ọ na-emi odude nso n'etiti obodo nke Klagenfurt na-eje ozi ụfọdụ flights ka European ntụrụndụ na mepere ebe. Klagenfurt Airport mejupụtara otu obere njem ọnụ ụlọ nke atụmatụ ụfọdụ ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nakwa dị ka a ọbịa teres.
The onu ogbom na-enye ọtụtụ anọchi ufọt ufọt sized ụgbọ elu dị ka Airbus A320 nakwa dị ka nta ofụri ofụri ụgbọelu ugbo elu. Dị ka e nwere ndị mba ugboelu àkwà mmiri, busses na-eji n'ụgbọelu.
Onye edemede: Manfred Marbler